Bananbixii ka dhacay Qaramada Midoobay ee New York oo Looga soo Horjeeday Col. C/Laahi Yusuf
Buluugleey, Wednesday, September 21, 2005
Dad badan oo boorar watay, kuwaas oo Lid ku ahaa Col. C/Laahi Yusuf ayaa watay warqad Ogol Bannaan-baxii weynaa ee ka dhacay Xarunta Qaramada Midoobay ee New York ee looga soo horjeeday Col. Cabdullaahi Yuusuf oo sharaf dhac ku sameysay iyo ka maqnanshahii madaxda Caalamka qudbadii C/Laahi Yusuf oo Caro aad ah u keenay taagerayaashiisa.
Bannaan bax weyn oo ka dhacay Xarunta Qaramada Midoobay ee New York oo looga soo horjeeday Col:Cabdullaahi Yuusuf oo gacan ka hadal ka dhacay kadib markii dhalinyaro warqado ay u qaybiyeen madaxdii albaabka ka galysay, warqadaahaasi oo ay ku qornaayeen tariikhda madow ee Col. C/Laahi Yusuf iyo in uu yahay qabqable dagaal oo lagu soo doortay wadan dibadda ka ah Soomaaliya iyo siyaasad xumadiisa.
Waxaa Goobtaasi iskugu yimid maalintaas oo ahayd maalintii Sabtida 17ka September 2005 oo madaxdii iskugu yimid ay intii madaxweynayaasha iyo ra’iisul wasaarayaashiiba ay ka maqnaayeen balse Col. C/Laahi Yusuf qudbad ka soo jeediyay walow ay dadka taageersana aad u saluugeen maalinta Soomaaliya lagu aadiyay oo ahayd maalin fasax ah oo dadkii culculasaa oo arrinta dhibta soomaaliya loo sheegi lahaa ama wax ka qaban lahaa anay jooginba goobtaasi iyadoo ay sida wararka ay sheegayaan ay goobjoog ahayeen kaliya gacan yarayaashii wakiilada.
Col C/lahi yusuf shirka UNka waa isku aamini waayey inuu akhriyo qudbadii uu qoray Turjumaagiisa. Labada masuul ee ku magcaaban jagooyinka ugu sareeyaa dowladii Igad ku soo dhistay Kenya ayaa ka qeybgelayey Shirarka muhiimkaa oo ka dhacayey Magaalada New York . Wuxuu muujiyey Sharaf dhaca uu kala kulmay Col C/lahi Yusuf shirka uu rabay inuu ka qayb galo kadib markii uu aamini kariwaayey inuu akhriyo qudbadii loo soo qoray ee uu u akhriyey Turjumaankiisa C/laahi Shiikh Ismaciil . Waxaa wax lala yaabo ah in kornaylka oo markii la weydiiyey sababta uu khudbada u jeedin waayey ku jawaabey wadnaha ayaa i xanuunayey isagoo hoostana ka lahaa “waar sida wax loo laayo uun baanu ka fekereynaye maanagaa is lahayn wax akhri baa lagu oran doonaa. Mida kale meeshan anigu waan u soo baryo tegey sida wax loo baryana keli kelidaan ku aqaan ee caalam i soo eegaya anigu hadalo qurxoon oo lagula hadlo maba soo baran”.
Waxaa xusid mudan in la shaaciyey qudbadii uu Shariifku ka akhriyey shirkii uu ka qayb galay ee New York. Inkastoo qudbadaas uu diyaariyey mudane SIFIR hadana Shariifku wuxuu u akhriyey si geesinimo leh oo ka dhigan sidii uu isagu soo diyaarsadey ama aqoonteedii leeyahay, taasina waxay ku tusinaysaa Kalsoonida uu Shariifku ku qabo naftiisa iyo shakhsiyadiisa, wana kan maanta Col C/laahi ka hortaagan inuu iibsado dhiiga ummadda rayidka ah ee ku dhaqan Muqdisho ee uu la damacsan yahay inuu xasuuqo.
Albaabka Qaramada Midoowbay ee New York ayaa waxaa taagnaa xag walba dad aad u fara badan oo Soomaali ah iskagana kala yimid Maraykanka iyo Canada oo muujinayay diidmada ay ka qabaan dagaaloogaha Col. C/Laahi Yusuf Ahmed balse taageerayaashiisa ayaa ka fursan waayey iney farasaaraan dadkii warqadaha qaybinayay, hase ahaatee ciidanka amaanka ee loogu talagalay goobta UN-ta New York oo heegan ahaa ayaa isla markiiba soo kala dhexgalay. Dhinaca dadka warqadaha qaybinayay boorarkana watay Lidka ku ahaa Col. C/Laahi Yusuf ayaa watay warqad ogolaansho ah oo ay ka soo qaateen Xafiiska quseeya banaanbaxyada madaxda banaan oo ay horay u qaaten, isla goobtiina booliska ku tusay warqadahaasi Fasaxa ah, taasi oo ay sababtay in ay iska sii wataan mudaaharaadka, meesha kuwii kalena laga kaxeeyay goobtass.
Qalalasahaas ay dadka Soomaalida ah ee degan waqooyiga Amarica iyo Canada ay sameeyeen ayaa meel fog gaarey kadib markii mudaaharaadka lagaga horyimid Col. C/Laahi Yusuf qoraalkiisa loo gudbiyay warbixinadooda Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay UN-ka Mr.Kofi Anaan taas oo Lagu cadeeyay Korneel C/Laahi wuxuu ahaan jiray, waxa uu hadda yahay iyo waxa uu damacsanyahay.
Hadaba dadkaasi gudbiyay warbixinadaasi waxaa ka mid ahaa urur Cusub oo ay aqoonyahano degan Maraykan gaar ahaan Minnesota iyo waxaa kaloo gudbiyay Dr. Cali Khaliif Galayr oo ahaa ra’iisul wasarihii dowladii ku meelgar ahayd ee Carta lagu soo dhisay oo Col. C/Laahi Yusuf xurguf aadihi ka dhaxaysay. waxaa kale oo warbixintan mid la mid ah gudbiyay ama qoray Prof. Cabdi I.Samater,Suldaan Hure, Liibaan Shandile iyo Qaarkale oo badan.
Col. C/Laahi Yusuf ayaa in mudo ahba loo diidanaa Visaha Maraykanka balse ku yimid damiin taasi oo kaliya loo ogolaaday in uu joogo agagaarka Qaramada Midoobey New York City kadibna uu noqdo taasi oo dhirbaxo ku noqotay Taageerayaashiisa. Waxaa kale oo xusid mudan in Guddomiyaha Baarlamaanka, Mudane Shariif Xassan Sheikh Adan iyo wafdi uu hogaminayo loo ogaladay visaha Maraykanka oo buuxa oo ay ku mari karaan Gobolada dalka Maraykanka oo dhan, kadibna ay u gudbi doonan dalka Canada halkaasi oo ay ka heleen Jaliyadda degan Canada oo casuuntay wafdigaas.
Ugu danbayntii waxaas oo dhan waxay cadayn u tahay in Col. C/laahi Yusuf uu ku guuldaraystay Ujeedadii uu lahaa oo ahayd hub iyo lacag in uu ka helo USA taasi oo soo afjari doonta hamigaa uu u qabo in cudud maleeshiyo uu ku qabsado Muqdisho. Waxaa ka hoos baxday korneylka in dalka Mareykanka dhaqaalihiisa hadda uu liito, uuna u baahan yahay dhaqaale uu Yurub ka soo deynsado si uu uga soo kabto dufaanada ku dhuftay New Orleans oo u baahan lacag dhan qiyaata 200 bilyan Dollar iyo kor u kicii sicirka shidaalka oo waxyeelo u geystey koboca dhaqaalihiisa.
Abshir Geedi Cilmi